DEG DEG: Rooney oo Xaqiijiyay inuu u ciyaarayo Xulka England balse…… – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid iyo Getafe ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Man City iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Leroy Sané oo qarka u saaran inuu si rasmi ah ugu biiro kooxda Bayern Munich
Guardiola oo si layaab leh u soo gaba-bageeyay wararka la xiriirinaya Jadon Sancho inuu dib ugu laabanayo Man City
Rivaldo oo si kulul u wareeray tababare Quique Setién kaddib barbarihii ay la galeen Atletico Madrid
DEG DEG: Rooney oo Xaqiijiyay inuu u ciyaarayo Xulka England balse……
Byare November 4, 2018
(England) 04 Nof 2018. Wayne Rooney ayaa xaqiijiyay inuu u ciyaarayo xulkiisa England ciyaarta ay ku wajahayaan USA balse wuxuu carabka ku adkeeyay inuu yahay kulankiisii ugu dambeeyay uu u ciyaaro xulka lagu naaneyso Saddexda Libaax.
SunSport ayaa goor dhaweyd sheegtay in Rooney lagu wado inuu markale ka soo muuqdo xulka England balse iminka laacibka ayaa afkiisa ka xaqiijiyay.
Xulka England ayaa ku sharfaya xiddigooda ugu goolasha badan taariikhda ciyaarta ay la yeelan doonaan Mareykanka 15-ka bishan iyadoona lacag loogu ururin doono Rooney Foundation International.
“Dhabtii waan isla hooseeyaa aad ayaana ugu faraxsanahay inaan England kula ciyaaro Wembley markale,” Rooney ayaa sidaa yiri.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan Gareth Southgate iyo FA uga mahadnoqo inay xulka dib iigu casuumaan ayna gacan ka geystaan inay caawiyaan hey’adeeda.
“Inaan u ciyaaro xulka England waa Sharaftii iigu wayneyd waayaheyga ciyaareed, sidaa darteed inaan ku guuleysto kulankeygii 120-aad ee xulka iyo keygii iigu dambeeyay waxay i noqon doontaa waqti gaar ah.”.
Shaxda rasmiga ah ee Chelsea vs Crystal Palace (Eden Hazard oo dib u soo laabtay)
Valverde oo soo saaray liiska xiddigaha uu u soo xushay kulanka Inter (Messi oo ......)